Ciidamada Turkiga oo kusii siqaya miyiga degaanka Manbij. – Radio Muqdisho
Wixii kadanbeeyay markii uu Turkiga ku dhawaaqay bilowga hawlgalka Suuriya CiidamadaTurkiga ayaa gacanta ku dhigay seddex tuulo oo hoos taga deegaanka Manbij.
Wakiiladaha Warbaahinta dunida qaarkood ayaa sheegay in CiidamadaTurkiga iyo kuwa mucaaradka Siiriya ay qabteen saanad hub ah oo la sheegay in ay adeegsanayeen Ciidamada Dimuqraadiga Siiriya ee ku suganaa Xalab.
Sidokale warar kale ayaa sheegaya in ciidamada militariga Turkiga anay wali gaarin magaalada Manbij, balse gelinkii dambe ee shalay ay ciidamada galeen magaalada Manbij oo ku taalo waqooyiga magaalada Xalab, oo xaduud la leh Turkiga.
Wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa soo werisay in ciidamada Kurdiyiinta ay bilaabeen inay ka hortagaan weerarada Turkiga iyo kooxaha Siiriya ee daacada u ah oo fadhigoodu yahay deegaanka Ras al-Ceyn, ee dhacda waqooyga bari ee Suuriya.
Wakaaldad wararka Suuriya ee “SANA” ayaa dhankeeda qortay in cutubyo ka tirsan ciidamada Turkiga ay gudaha u galeen magaalada Tal Tamar, oo qiyaastii soddon kiiloomitir u jirta magaalada Ras al-Ceyn.
Ugu danbeeyntii Wasaaradda Difaaca Turkiga ayaa maanta ku dhawaaqday in ciidamada Kurdiyiinta looga dilay 595 oo ruux tan iyo markii uu bilowday howlgalka logu magacdaray “guga nabadeed”
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo qaabilay Agaasime goboleedka hey’adda IOM u qaabilsan Bariga iyo Geeska Afrika
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo qaabilay Agaasime goboleedka hey'adda IOM u qaabilsan Bariga iyo Geeska Afrika